Ingangalala yelitye lenyengane ephile ubomi obuzele imfundo, uthando, noncumo olunobubele #BonganiMayosi - Vernac News
August 4, 2018 May 2, 2020 Vernac News
EKapa – Uqhutywe kakuhle umngcwabo wenkcubabuchopho yentliziyo yeDyunivesithi yaseKapa uNjingalwazi Bongani Mayosi obubanjelwe e-Cape Town International Convention Centre ngoMgqibelo.
UNjingalwazi Mayosi wathabatha umphefumlo wakhe kwiveki ephelileyo.
Izithethi ngezithethi zimchaze lo ka Mayosi njengengangalala kwicandelo lezempilo ikakhulu kwimiba edibene nentliziyo kunye nophando olujolise kwisiganeko sesifo sentliziyo ebantwini abangangamahlwempu bezwekazi i-Afrika.
Igqwetha uNcumisa Mayosi ongudadewabo womfi umchaze umnakwabo njengomntu obezinikezele ekuphuculeni impilo yabantu base-Afrika. Intsusa yokugula kwakhe, uxinzelelo ngokwengqondo, uNcumisa uthe yaqala mhla lo ka Mayosi waqashwa njengeNtloko yeCandelo Lezempilo e-UCT. UNcumisa uthe uNjingalwazi wakhathezeka kakhulu yindlela abafundi ababeqhankqalaza phantsi kwiphulo i #FeesMustFall abamphatha ngayo, bemthuka besithi ngumthengisi kunye nekhokhonathi. UNcumisa uthe umnakwabo ubephantsi koxinzelelo nasemsebenzini kuba ubegxekwa ngabantu abexelenga nabo emva kokuba wazijul’ ijacu exhasa iphulo #FeesMustFall.
USihlalo weBhunga e-UCT uSipho Pityana uncome lo kaMayosi ngokuzinikezela ekuncedeni uluntu. UPityana ulumkise ngokutyholana esithi abantu mabangathethi bagabadele ngesizathu sokuzibulala kukaMayosi, watsho esithi “oyena mntu usaziyo isizathu sokuthabatha ubomi bakhe nguNjingalwazi Mayosi, akekho omnye”.
Lo ka Pityana uthe phezu kwegalelo abenalo lokaMayosi kwezempilo, indlela alishiye ngalo ihlabathi izakuveza elubala isifo esingumbulalazwe, uxinzelelo lwengqondo. UPityana uthe esi sifo sibahlasela kakhulu abafundi abasedyunivesithi kwaye sihlasela amathambo wengqondo lonto yenze kubenzima ukucinga nokusebenza njengomfundi. UPityana uvumile ukuba lo kaMayosi ebeenenjongo zokusishiya isikhundla sakhe ngenxa yoxinzelelo lomsebenzi kodwa wanqandwa ngowayesakuba yinqununu ye-UCT uGqirha Max Price ngelithi bazakumbonela esinye isikhundla e-UCT. Uqhubeke wathi akukho nanye idyunivesithi ebinokufuna ukulahlekwa sisakhono sikaMayosi wagqibela ngombuzo-buciko othe: Ingaba bethu elona tyala lethu kukuxabis’ inguqu lomhlobo de sabeka ubomi besisifundiswa emngciphekweni?
UGqirha Aaron Motsoaledi onguMphathiswa wezeMpilo ubalise ngembali yokudibana kwakhe noMayosi kunye nomfazi wakhe uNjingalwazi Nonhlanhla Khumalo. Uthe wadibana nesi sibini kwiveki yokuqala yoqhelaniso lwabafundi abatsha kwiminyaka yoo-1980 keiDyunivesithi yaKwaZulu Natal, uthe wayeyinkokheli yesisibini ekwanguMongameli weBhunga laBafundi. UMotsoaledi uthe waqwalasela ukuba esisibini sasithanda ukuhlala calanye kwisithuthi sabafundi kulapho waqaphela khona ukuba ikhona into engaphaya esihlanganisayo. Uqhubeke ebalisa ngegalelo lakhe kuphando lwezempilo watsho engqina ukuba inene isizwe silahlekelwe. Ugalele ke naye uMotsoaledi ngakwabo athi babenegalelo ekubeni uMayosi afike kwisigqibo sokuthatha ubomi bakhe ebalula ke isimilo sabafundi kunye nabalingani bakhe emsebenzini.
UNosipho, Sivuyile, Camagu kunye nomfazi uNjingalwazi Khumalo, befundelwa imiyalezo zizihlobo, babalise ngothando lukaMayosi obebaxabise kakhulu, ewuthanda umsebenzi wakhe kwaye elixabisile ixesha lesidlo sangokuhlwa.
Umnakwabo uSipho Mayosi uvale ngelokubulela waze waceba i-UCT ukuba iphande ngeziganeko ezikhokhelele ekubeni umnakwabo athabathe ubomi bakhe. Eli likhwelo elihlatywe liGqugula labaHlohli AbaNtsundu e-UCT emva kweveki kanam nawe iyidyunivesithi nabafundi betyholana ngokubulala esisifundiswa.
Umzimba weligorha utshisiwe ngoko ke kuye kwaya usapho kuphela emadlakeni.
Ndlela ntle Radebe, Mthimkhulu, Bhungane. Ah Jongilizwe!